"Asiboni ukuthi siyophinde sibathembe abashayeli bamatekisi" | News24
"Asiboni ukuthi siyophinde sibathembe abashayeli bamatekisi"
Johannesburg - Izihlobo zabesifazane ababili abadlule engozini yetekisi neloli eyenzeke ngesonto eledlule eRandfontein zithi zisakhungathekile kanti futhi zithi aziboni ukuthi zisazophinde zibathemba abashayeli bamatekisi.
Kwashona abantu abangu-15 ngesikhathi itekisi ababehamba ngayo ishayisana neloli ngoLwesihlanu.
OLUNYE UDABA: UMchunu uthi iyashaqisa kakhulu ingozi eyenzeke e-KZN
Kukholakala ukuthi umshayeli wetekisi wangena ngaphambi kweloli.
Umndeni wakwaMabule uthi waqala ukusola ukuthi kukhona okubi okwenzekile ngesikhathi umama wekhaya uThandi nodadewabo omdala u-Elisa bengabuyi ekhaya ngoLwesihlanu ebusuku ngemuva kokuhamba eRandfontein ekuseni ngalolo suku.
U-Amanda Mabule ongudadewabo ka-Elisa nendodakazi kaThandi ithi uthi akaziboni ehamba noma edlule endaweni yesigameko okwashonela kuyo abathandiweyo bakhe.UPalesa ongumakoti wakwaMabule uthi kuyamkhathaza ukucabanga ngokugibela itekisi, kubika i-Eyewitnessnews.
"Asikwazi ukubathemba abashayeli bamatekisi, ngisashaqekile kanti futhi angifuni ukuphinde ngigibele itekisi."